पारंपरिक सेल फोन अब अर्को दस वा पन्ध्र वर्ष पहिले लागि रूस लागि एक लक्जरी आइटम छन्। तर प्रेमीहरूको लागि असामान्य सेल फोन को तिनीहरूले, जापानी कोरियाई र पश्चिमी निर्माताहरु को हेरविचार लिएका छन्, किनभने भीड देखि बाहिर खडा गर्न मौका अब छ।
आकर्षक नोकिया प्रतिनिधि
आफू र आँखा वरिपरि ती ध्यान आकर्षित गर्न, तपाईं नोकिया 7380 खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। प्रसिद्ध फिनिस ब्रान्ड को यो प्रतिनिधि मुख्यतया यसको मूल र धेरै आकर्षक उपस्थिति द्वारा विशिष्ट छ। आकार र शरीर को आकार, किबोर्ड को कमी, मूल डिजाइन - यो असामान्य सबै छ। त्यहाँ त खरीद यो स्थायी प्रयोगको लागि, बाहिर जान राम्रो छ, फोन र minuses छ।
सामान्य डिजाइन देखि प्रस्थान, कोरियाई उत्पादकहरु, अर्थात् सैमसंग निगम, एक पाउडर संकुचित आकारको नयाँ मोडेल सिर्जना गरियो। फोन एक पूर्ण असामान्य डिस्क व्यवस्थापन प्रणाली र स्वचालित तह सिस्टम छ। मोडेल विशिष्ट कार्यक्षमता छैन, त्यसैले यो ब्रान्ड आफ्नो मित्र चकित वा पार्टी मा चमक मात्र expedient छ को फोन किन्न।
चिनियाँ ईन्जिनियरहरु द्वारा डिजाइन चुरोट लागि कक्ष अचम्मका मोडेल। ग्याजेट हालको अवस्था लागि सबै आवश्यक विकल्प संग सुसज्जित छ, र उपस्थिति मा चुरोट को एक प्याक कुनै फरक छ। सिर्जना राजा 3838 धेरै peculiar छ देखिन्छ।
यसलाई डिस्क टेलिफोन सेट, एक पटक लगभग हरेक सोभियत हल, को गर्मी मा sunk सजी, जस्तो थियो। तर, छ। ब्याट्रि, सिम कार्ड र जीएसएम-संचार तिनीहरूलाई प्रदान, एक डिस्क उपकरणको सही प्रतिहरू - OBLIVION मा छोड्ने छैन राम्रो डिजाइन गर्ने क्रममा, अमेरिकी कम्पनी SparkFun इलेक्ट्रनिक मोबाइल फोन सिर्जना गरियो। एक मोडेल यस्तो अरूको भावना पैदा गर्न बाध्य छ। त्यसैले, यदि दर्शक, SFE फोन दृढ किन्न पर्याप्त तर्साउन गर्ने इच्छा छ।
आज, लगभग हरेक मोबाइल फोन मोडेल निर्मित भिडियो क्यामेरा छ। तर, हामी सबै निर्मित क्यामेरा तस्बिरहरू गुणस्तर सधैं अडान-एक्लै भिडियो उपकरणको गुणस्तर गर्न कमसल छ भन्ने थाहा छ। एलजी स्थिति सुधारने निर्णय र वास्तविक क्यामेरा-मोबाइल सिर्जना गरेको छ। यो उपकरण मात्र उत्कृष्ट कार्यात्मक प्रदर्शन छ, तर पनि धेरै मूल डिजाइन छ। मोबाइल फोन वा क्यामेरा - यो देख, यो के हो बुझ्न गाह्रो छ?
एक स्पर्श-अप्टिकल प्रदर्शन संग मोबाइल फोन
यो शताब्दीको सुरुमा, स्वीडिश कम्पनी नियोनोड मूल अप्टिकल सेन्सर-नियन्त्रण प्रणाली संग पहिलो मोबाइल फोन सिर्जना कि बाहिर जान्छ। विशेष धन्यवाद तिनीहरूले कमीकमजोरी एक नम्बर थियो रूपमा, ग्राहकहरु बीच पाए। नयाँ खोज को लागि सबै क्रेडिट उनको दिइएको थियो त स्याउ, बढी सफल साबित भएको छ। तर Swedes निराश गरे, र आज जारी धेरै प्राविधिक संकेतक सबैभन्दा "उन्नत" मोबाइल फोन पनि उच्च चिरपरिचित निर्माताहरु जो एक सम्पूर्ण नयाँ मोडेल।
यी मोडेल साथै चिन्ने एक असामान्य सेल फोन, wristwatch Teslon TWC 1150 साथै जापानी प्रतिनिधि -Sharp 904SH समावेश गर्न आफ्नो मालिक किनभने अचम्मको स्क्यानिङ सिस्टम को "आफ्नो अनुहार मा"। मोबाइल फोन interlocutors DBTEL m50 एक परम्परागत किबोर्ड, तर स्क्रोलिङ सुविधा छैन। चिनियाँ एक सुगंधित मोडेल Hyudai सांसद 280 र एक टेलीफोन एक एकीकृत अचेत बनाइएका छन्। त्यहाँ कि हुनेछ!
सूचना पत्रकारिता र सूचना मा नोटिस। Infosoobscheniya मोबाइल: कसरी असक्षम
सेवा "Bilayn.Dengi": नक्सा, मोबाइल पैसा र remittances। सेवा कसरी सक्रिय र एक कार्ड "Bilayn.Dengi" जारी गर्न?
सम्मेलन कल - 21 औं शताब्दीको संचार को नयाँ सम्भावनाहरू
एक वाइफाइ पहुँच बिन्दु कसरी सिर्जना गर्ने
Poplin वा sheeting - राम्रो छ? Poplin - कपडा कस्तो? calico कपडा
आपराधिक क्रमांकको अनुच्छेद 141: वर्णन, टिप्पणी र नियम
लघु crocheted खिलौने लागि आधारमा Amigurumi घन्टी
फुकेत समीक्षा होटल ध्यान आकर्षित
आधुनिक पश्चिमी दर्शन
"Akvadetrim": निर्देशन र प्रतिक्रिया। भिटामिन "Akvadetrim": रूसी एनालग
अक्सिजन ककटेल र आफ्नो स्वास्थ्य